Rafitra fandatsahana ampiasaina amin'ny fizotrana famonoana mikraoba fomba fogona maina dia azo ampiasaina amin'ny toerana marobe. Amin'izao fotoana izao, rehefa mandinika fomba mahomby hanilihana efitrano, dia ireo vahaolana toy izany dia matetika no raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalaman'ny hafa. Ireo fitaovana ireo dia afaka am-pahombiazana tsara any amin'ny toeram-piasana na mandritra ny fivorian'ny fianakaviana, ao amin'ny zaridaina koa. Ireo rafitra diso dia vita amin'ny singa ambony kalitao, ary ny nozzles ampiasaina dia asiana fahaiza-manao avo lenta.
Misintona katalaogy sy ny lisitry ny vidiny >>
Rafitra fandatsahan-tsoloka ho an'ny disin-tany amin'ny tolotra Design City
Ny fitaovana diso dia manala ny habaka miaraka amin'ny fomba mazoto maina amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny zavona miaraka amin'ny famonoana bibikely. Ny fanomanana toy izany dia misy akony mandratra amin'ny bakteria sy otrikaretina ao amin'ny tontolo iainantsika. Ny vokany maina ny zavona manana fananana miketsa avo izy ary miaraka amin'izany dia azo antoka amin'ny lafiny fidirana ifandraisana aminy.
Misaotra ny mety hisian'ny fampiasana rafi-pifidianana eo ambanin'ny toe-javatra rehetra, i.e. toerana, w parks ary ny tranobe anatiny, ary noho ny mety hampiasa otrikaretina mifanentana, dia ampiasaina betsaka tokoa ireo fitaovana ireo.
Ny rafitra fanalam-barotra maoderina dia ampiasaina amin'ny disinfection fiomanana simika amin'ny endriky ny aerosol matevina, izay mamela ny disinfection, izany hoe, ny fihenan'ny lanjan'ny microorganisme pathogen eny amin'ny rivotra dia vita.
Ny fanafoanana ny microorganism pathogen mampiasa rafitra fogging dia azo atao koa any amin'ny hopitaly, klinika fitsaboana, trano ary fitateram-bahoaka.
Ny fisainana torolàlana ao an-tsaina Chief Inspecte Sanitaryamin'ny fisorohana ny fihanaky ny COVID-19, manolotra izahay vahaolana maoderina mba hampitomboana ny fiarovana eo amin'ny toeram-piasana.
azo antoka sy mahomby disinfection toerana mampiasa ny fomba maina fog
fepetra miaro mivantana: saron-tava, fahitana
dispensers ranon-javatra: mijoro ary apetraka ny rindrina
fanaraha-maso ny habakabaka sy ny fandrosoana ny haavon'ireo mpiasa sy mpanjifa manamaivana ny fandrahonana ateraky ny areti-mifindra COVID-19.
Ireo vahaolana naroso momba izany tobim-panavotana, mpisera sy fitaovana fiarovana miaro tena manokana no azo ampiharina mandritra ny fotoana mitovy.
Hitanisa ity pejy ity Vaovao amin'ny tolotra! Ivontoerana famonoana otrikaretina - fahadiovan'ny tanana amin'ny METALCO
Ny famonoana otrikaretina eny amin'ny habakabaka dia misy alàlan'ny fofom-bary maina sy ny rivotra. Ny tarika mpiasa mahay dia ampiarahina amin'ny fampiasana milina manokana sy fanomanana. Ity fomba ity dia ankatoavina ho ampiasaina amin'ny andrim-panjakana, fitateram-bahoaka, birao, sekoly, ny akanin-jaza ary hopitaly.
Ny disinfection maina dia fomba haingana sy azo antoka hanimbana ny habaka, miorina amin'ny pôlitika biodegradable, misy fahazoan-dàlana hampiasa sy hanamafisana ny hetsika antivirus, koa manohitra ny COVID-19.
Izahay dia hamakafaka ny fomba fiasa ao amin'ny tranonao
Izahay dia hanomana torolàlana momba ny fandehanana tsara amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa ary manamaivana ny loza mandritra ny valanaretina
Miorina amin'ny traikefa anananay orinasa maro avy amin'ny indostrian'ny HoReCa, rojo fisakafoanana, izay ny toeran'ny olona sy ny vokatra dia marika fototra;
Miankina amin'ny fanamarinana, hanolotra vahaolana manokana momba ny tobim-panavotana, mpisintaka toerana, fitaovam-piarovana manokana, serasera fifandraisana
FAHAFATESANA NY TANJY MANAO AN'I DRY MIST METHOD
FAHORIANA FAHASORANA mamela ny fandotoana ny tany sy ny rivotra;
Nataon'i TEAM-pifandraisana mendrika mampiasa MACHINES MANOKANA
FAHAFATESANA MISY : any amin'ny andrim-panjakana, fitateram-bahoaka, birao, sekoly, akanin-jaza, hopitaly;
FIASANA MAHOMBY mameno ny zavona amin'ny alàlanay (100 m3 dia eo ho eo eo amin'ny 6 min)
FAHASOAVANA INDRINDRA sy MANDRAKIZAY, mifototra amin'ny kaody azo biodegradable, tsy aldehydes, tsy klôtina, tsy misy poizina;
NY PRODIKA NANANA FOTOTRA ARY FANDROSOANA DATA azo ekena ho an'ny fampiasana
Miatrika ireo fenitra EN14476 eo amin'ny sehatry ny fitsaboana amin'ny fanoherana ireo tsimokaretina tsy misy valopy (oh. Norovirus, Poliovirus, Adenovirus) sy casing (Vacciniavirus) izay ahitana ny COVID-1 ihany koa
PRODIM-TRANO DAHOLO IZAO MBOLA TOKONY IZAO
Fahazoan-dàlana marketing amin'ny vokatra biocidal: 7420/18. Taratasy PZH No.BK / K / 0863/01/2018
Broad Biocidal Spectrum: Manimba bakteria, virus, spores-spore, fungi, bobongolo
Action: Fanadiovana ny habakabaka feno fandroana, fanasana, fanadiovana, fanadiovana, famonosana rivotra, fanesorana vatan-dàlana
mamindra: Vovoka, vovoka, vovoka, sediment, fandotoana organika, mikroôroôjia, pathogens
Ny tombony sy ny tombony ho an'ny mpampiasa
SAFE ho an'ny mpampiasa, mifototra amin'ny kaody maoderina sy azo ovaina tsy misy alikaola, tsy aldehida, tsy klôtina, tsy misy poizina.
NON-FLAMMABLE - famolavola miorina amin'ny rano tsy esorina dia manafoana ny loza mety hateraky ny afo.
Mifanaraka - NEUTRAL ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana: plastika, ankamaroan'ny metaly ao anatin'izany ny aliminioma, gazy vita amin'ny fingotra, fonosana loko, lamba ...
MULTI-TASK - manasa tànana, manondraka, mamonosotra, taola mavitrika, mandro, mandoto
MANASA sy manadio - manala amin'ny fomba mahomby ny loto sy ny loto voajanahary: manala ny bobongolo, ny holatra, ny vovoka, ny diloilo, ny diloilo, ny tasy matavy amin'ny lamba firakotra sy ny karipetra, ny fandoavana, ny diky, ny rà, ny sakafo lo, ny fako biolojika, ny fako, sns.
Mamorona FOTOTRA FAMPISEHOANA ao amin'ny lanam-borona, izay manitatra ny hetsika amin'ny zoro miorina sy amin'ny fantsona
Azo antoka ny 100% ny disinfection - voasedra araka ny fenitra EN eropeana. (* Table)
DISINFECTES MAHAY - Ny karazany biolojika be indrindra ao anatin'ny fotoana fohy indrindra hatramin'ny 15 minitra (bakteria, virus, holatra, spores)
HETSIKA BIOCIDAL FAST - Manimba ny Legionella Pneumophila ao anatin'ny 1 minitra araka ny EN 1040, EN 1276.
Misoroka ny fiforonan'ny holatra, bobongolo ary bakteria, satria manimba ny spores (spores) - tsy manakana ny fitomboan'ny zavamiaina bitika ihany fa manimba ny fitaovam-pirazanana.
HANALA NY TSY MAFY - Manala tsy tapaka ny fofona tsy mahafinaritra, fofona maloto amin'ny fako biolojika ary mamela fofona vaovao.
Fiomanana NANOCLEAN AIR GDU (VONONA MBOLA MAMPIKAOKA) tsy mihetsika fa miorina amin'ny rano ny rano.
Ny fanomanana dia biodegradable, tsy misy poizina, tsy misy otrikaina, tsy misy alikaola ary tsy mahasosotra.
Ny vahaolana fiasa 5% dia tsy voasokajy ho mampidi-doza hoy ny Fitsipika 1272/2008 / EC.
Manalavira ny zaza. Vakio ny SDS alohan'ny hampiasana azy.
Ny vahaolana mampiavaka miainga mifototra amin'ny nanoparticle volafotsy sy varahina.
DISINFECTES MAHAY - Ny karazany biolojika faran'izay haingana ao anatin'ny fotoana fohy hatramin'ny 15 minitra
(Bakteria: 1 ÷ 5 minitra, Virosy: 5 minitra, holatra: 1 ÷ 15 minitra, Spores: 5 minitra, Mycobacteria: 5 minitra)
FIVOROHANA FARANY BIOSIDA - manala ny bakteria Legionella Pneumophila ao anatin'ny 1 minitra araka ny EN 1276.
MAMPISEHORANA ny fitomboan'ny bakteria, ny holatra ary ny bobongolo, satria tsy manakana ny fitomboan'ny microorganism ihany, fa manimba ny fototarazo. Voazaha toetra - nizarana araky ny fenitra eropeanina EN.
HANALA NY TSY MISY - Manala maharitra ny fofona holatra tsy mahafinaritra sy ny fofona maloto amin'ny fako biolojika.
SAFE ho an'ny mpampiasa, miorina amin'ny endrika maoderina azo antoka kokoa, tsy misy aldehydes, tsy klôtina, tsy asidra.
NON-FLAMMABLE - famolavolana miorina amin'ny rano dia manafoana ny loza mety hateraky ny afo.
MULTI-TASKING - manasa tànana, manondraka, mamonosotra, taola mavitrika, fampidirana, fametrahana.
MANasa sy manadio - manala amin'ny fomba mahomby ny loto sy ny fahalotoan'ny organika: manala ny bobongolo, holatra, vovoka, menaka, menaka,
ahitra maintso avy any ambony taolana sy ny karipetra, lozom, fais, ra, mandoto, sakafo simba, sns.
Manana ny taratasy fanamarinana PZH sy ny PERMIT ny varotra amin'ny vokatra biocidal.
clostridium difficile disinfectionizay manome disinfectionohatrinona ny disinfection air conditioningizay midika hoe disinfection ny tenyinona ny disinfectioninona ny disinfection ary inona no andraikiny hisorohana ny fihanaky ny aretinainona ny disinfectioninona ny disinfection, disinfestation, deratizationinona ny disinfection sy ny deratizationinona ny disinfection ary inona no dikanyinona ny disinfection ary ahoana no ahafahany miaro ny fihanaky ny aretinainona ny disinfection sy ny fomba ahafahana misoroka ny areti-mifindrainona ny disinfection sy sterilisationinona ny disinfection fantsikainona ny disinfection amin'ny cosmeticsinona ny disinfection eo amin'ny fananganana voloinona no dikan'ny hoe disinfectioninona ny teny hoe disinfection ary ahoana no fomba hisorohana ny fihanaky ny aretinainona no dikan'ny hoe disinfectioninona ny dikan'ny disinfectionfamonoana mikraobafamonoana aretina 24disinfection sy fitrandrahanadisinfection ny kirarofamongorana ny kiraro aorian'ny mycosisdisinfection ny kiraro lumpexinona ny disinfectionmanafoana inona ityinona ny disinfection ary ahoana no ahafahany miaro ny fihanaky ny aretinainona ny disinfection ary inona no andraikiny hisorohana ny fihanaky ny aretinamanafoana ny dikan'iodisinfection izay manalafanimbana maninona raha tsy misy toakafamaritana dikan-tenydisinfection sy fitrandrahanadisinfection sy fitrandrahana amin'ny salon mahafinaritrafanimbana ary famafazana amin'ny salon tsara tarehy pdfmanafoanana ny halavany iodisinfection atodydisinfection toymanafoana izay zava-dehibeny mana-tsinontsinona dia ilaina ny fisorohana ny fihanaky ny aretinany disin-bakoka izay ilaina amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretinany mana-disinidinika izay zava-dehibe amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretinafamonoana rivotrafamonoana rivotra tsy misy fatiantoka isaky ny firyny famonoana ny kofehy ao amin'ny hotely isaky ny firydisopection akohofamonoana aretina ny akohofanimbanana ny tranofamongorana ny fitaovanadisinfection amin'ny tongotradisinfection ny ozoninadisozection ny ozonina inona iodisinfection am-pandrianadisinfection aorian'ny pinwormsfanavakavahana aorian'ny nahafatesanyfanavakavahana aorian'ny matyfanafoanana otrikaretina aorian'ny fandevenanafamonganana ny vovokafanadiovana mihinimbamanafoana entanafanimbana tananafamonoana ratrafamonoana ratrafihazonan'ny hoditrafanimbana lavadranofihanaky ny rano lalinany disin-disony lalina miaraka amin'ny sodium hypochloritemaina fofona mainadingan'ny thermie firy mari-pahaizanadinganina mafana ny fametrahana rano mafana matetikadisinfection mafanafana matetikadisinfection ranofanimbana rano fisotrokilema famonoana kilalaofanadiovana ecolabohatrinona ny vidiny manaratsy ny fiharyohatrinona ny disinfection ny tranoohatrinona ny vidin'ny otrikaina disinfectionohatrinona ny disinfection amin'ny carte amin'ny fiantsenanamanao ahoana ny halavan'ny rivotra famonoana rivotramanao ahoana ny disinfectionmanao ahoana ny disinfection ny tranony maha-zava-dehibe ny disinfection amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretinamanasa sy manala tananaDokotera demodexmamaritra ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny fitaovana sy ny fitaovanaparvovirosis disinfectionpeta-drindrina famonoana rivotradisinfection am-pandrianamycobacteria, disinfectionjereo ny teny disinfection ao amin'ny loharanom-pahalalana azo omenao ary soraty hoe inona izanyfitrandrahana sy famonganana otrikaretinadisinfection mainamaina ny zavonascabies disinfection ny tranoteny disinfection teny inona ityilay teny hoe disinfection, izay zava-dehibe amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretinafogginghevitra manapotikaefitrano fandatsahanalalona mafanafogging ulvvidin'ny fandefasana ulvfandinihana ulv reviewsmanidina Warsawmanidina tsindry